अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार खुलाउन नपाइनेमा यी कुराहरु पर्छन - समय-समाचार
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार खुलाउन नपाइनेमा यी कुराहरु पर्छन
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ०८:४८
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार खुलाउन नपाइनेमा यी कुराहरु पर्छन :
८० दिन लामो लकडाउनपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने २१ दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअनुसार शुक्रबारदेखि उपत्यकाभित्र र अन्यत्र जिल्लाभित्र निजी सवारी साधन जोर विजोर प्रणालीमा चलाउन पाइने भएको छ ।